Gufgaf|Online किशोरावस्थाको मित्रता र माया
यौन जस्तै प्रेमलाई पनि हाम्रो समाजमा अनैतिक मानिन्छ । प्रेम भन्नासाथ समाजले अप्रत्यक्ष रुपमा यौनसँग जोड्दछ र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम अर्थात विवाहपूर्व गर्भवती आदि बारे सोच्दछ । यसलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिन्छ । त्यसैले समाजमा केटाकेटी बीचको तथा युवाको प्रेमलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । तर, हाल आएर आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सूचना प्रविधिको विकास तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्ध िविकासले गर्दा समाजले प्रेमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा क्रमशः परिवर्तन आउँदैछ ।
२. केटी मान्छेले केटा मान्छेसँग बोल्न डराउनु पर्छ हो ?
वस्तवमा केटा र केटी सबैभन्दा बढी खुलेर कुराकानी गर्न मिल्ने प्राणी हुन् । तर केहि कारणहरुले गर्दा उनी यसो गर्न सक्दैनन् । यसका थुप्रै कारणहरु हुन् सक्छन् जसमध्ये प्रमुख कारण सामाजिक कारण हो । हाम्रो समाजमा जति अवसर तथा स्वतन्त्रता केटाहरुलाई हुन्छ त्यति केटीहरुलाई हुँदैन जसको कारणले केटीहरु विभिन्न सामाजिक र आर्थिक कार्यबाट बन्चित हुन बाध्य छन् ।
बाल्यकाल देखि नै केटीहरुलाई सुशील हुनुपर्ने, धेरै बोल्न नहुने, आफ्नो प्रतिष्ठा–अनुशासनमा बस्नु पर्छ भन्ने कुराहरु सिकाइन्छ । फलस्वरुप केटीहरु केटाहरु जस्तो खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । तर अहिले नयाँ पद्धतिको शिक्षा, समाजको सोचमा क्रमशः सुधार तथा लैङ्गिक विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरुद्धारा केटीहरुका अवसरहरु बढ्दै गइरहेका छन् जसले केटीहरु पनि केटाहरु जस्तै खुलेर कुरा गर्न सक्ने वातावरणको विकास हुँदैछ ।
३. के केटा र केटी प्रेमी प्रेमिकाको रुपमा बाहेक एउटा राम्रो साथी बन्न सक्दैनन् ?
अवश्य सक्छन् । मित्रता लिङ्ग (कभह) हेरेर गरिने चिज होइन । मित्रता भावनात्कम नाता भएकाले केटाकेटीमा एक अर्का प्रति सम्मान, प्रेम र सकारात्मक सोचाइ छ भने उनीहरु अवश्य पनि साथी बन्न सक्छन् ।
४. दुई मिल्ने साथी बीच माया बस्न सक्दैन र ?
दुई मिल्ने साथी वा व्यक्ति भन्नाले समान उद्देश्य, उस्तै व्यवहार, क्रियाकलाप, सोचाइ र उस्तै उस्तै सामाजिक परिवेश भएका व्यक्तिलाई जनाउँछ तर प्रेमी प्रेमिका भनेको चाहिं दुई मिल्ने साथी तर भावनात्मक रुपमा साथीभन्दा अलिक नजिक भएको व्यक्ति भन्ने बुझ्नुपर्दछ । हो, मिल्ने साथीले नै हाम्रो भावना बुझ्न र सहि गलत छुट्याएर सहि बाटोमा लगिदिन सक्छ । दुई मिल्ने साथीको बीच माया प्रेम बस्न सक्छ तर, सबै मिल्ने साथी प्रेमी पे्रमिका नै बन्नुपर्दछ भन्ने छैन । यदि साथीको सम्बन्धको क्रममा समय बित्दै जाँदा एक अर्का प्रति विश्वास बण्ढ्ने तथा सधैं सँगै भएमा भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने भावना दुवैमा बढ्दै गएमा र व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक रुपमा उपयुक्त भएमा प्रेमी प्रेमिका पनि बन्न सक्छन् ।
५. के माया भनेको सेक्स र सेक्स भनेको माया हो ?
माया प्रेम भनेका संवेगहरु हुन् जुन मानसिक रुपमा उत्पन्न हुन्छन् । यसलाई नाप्न वा यसको उपयोग आँखाले देख्न सकिंदैन । आज भोलि विशेषगरी युवापुस्तामा माया लाउनु भनेको शारिरीक सम्बन्ध स्थापित गर्नु अथवा सेक्स प्राप्त गर्नु भनेर सोचिने गरिएको छ । यो धारणा धेरै हदसम्म गलत हो । वस्तवमा मानव शरीरका प्रमुख आवश्यकताहरुमा भोक, तिर्खा, निन्द्रा र यौनपरक व्यवहारहरु समावेश छन् ।
खानाबाट भोक मेटिन्छ । झोलिलो पदार्थको सेवनबाट तिर्खा मेटिन्छ । त्यस्तै २४ घण्टामा निश्चित् समयको निन्द्राद्धारा निन्द्राको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिन्छ । यसैगरी यौनपरक व्यवहार जसलाई सेक्स भनिन्छ, त्यो भने विपरीत लिङ्गी व्यक्तिसँगको सम्भोगले त्यसै सम्बन्धी गहिरो सोचाइले कहिलेकाहिं हस्तमैथुनद्धारा आवश्यकताको परिपूर्ति गरिन्छ । यौन व्यवहारको लागि यदि विपरीत लिङ्गी व्यक्तिको सहायता लिइन्छ भने दुवैले एक अर्कालाई उनीहरुको इच्छा पत्ता लगाउनु र दुवैको इच्छामा तालमेल भएको हुनु अति नै आवश्यक छ । यसो भन्दैमा केटा र केटी भेटिने बित्तिकै र उनीहरुको सोचाइ मिल्ने बित्तिकै सेक्स भइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिं बिलकुलै होइन । सेक्स भनेको शारीरिक आवश्यकता त हो तर यो प्रजनन्को लागि वा सन्तान उत्पादनको लागि आवश्यक महत्वपूर्ण व्यवहार हो । यसको चाहना किशोरावस्था देखि सबै मानिसमा नै हुन्छ । तर, यसका लागि परिपूर्ति गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।
मायालाई सेक्सको पर्याय मान्यौ भने माया नै बिथोलिन थाल्छ र आफ्ना मायालुहरु आफूबाट टाढा जाने सम्भावना हुन्छ ।